I-Disney's Frozen ine-simulation yekhephu emangalisayo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-3D Ayisiqulathe kuphela ukubanakho kweemvumi Kwaye iimodeli zokwenza uyilo lomlinganiswa omangalisayo okanye ukwenza oopopayi bomlomo esivumela ukuba sikholelwe ukuba umlinganiswa ophambili wefilimu yoopopayi ucacisa imilebe yakhe ngokugqibeleleyo, kodwa ukuba kukho abanye abadlali abaphambili abanikezela ngobunyani obunokwenzeka kwiziphumo ezithile.
I-algorithms zinetyala lokuba kukho imiphumo ethile eyimfuneko kwindiza ethile okanye kwindawo ethile, evelisa uvakalelo lokuba kwehla ikhephu emhlabeni ukuze yahlukane ibe ngamacandelo ahlukeneyo njengoko inokwenzeka ngokwenyani. Kulapho ialgorithm yeMPP esetyenziswe kwiFrozen, imovie yeDisney, iya kudlala ukulinganisa iziphumo zazo zonke iintlobo zezinto ezinento yokwenza nekhephu.
Emva kolo faniso lwekhephu ziiyure kunye neeyure zomsebenzi kunye nomzamo wokwenza isiphumo esingahleliwe sinike ezona mvakalelo ukuba iqhwa lidibana nento. Mhlawumbi singayenza ngesandla, oko kukuthi, senze oopopayi bethu kwaye sihambe ngesakhelo, kodwa enkosi kwiiplagi, ezinje ngamakhulu enkqubo efana neMaya okanye i-3DStudio Max, sinokugcina ixesha esinokuphulukana nalo iiyure.
Kwividiyo ekwabelwana ngayo yiDisney, ialgorithm esetyenzisiweyo ukwenza ukulingisa kwekhephu kwiFrozen icacisiwe. Kule algorithm yaziwa ngokuba yi-PMP, bayachazwa onke amanyathelo abandakanyekayo ukuze ekugqibeleni isiphumo sokwenyusa ikhephu lokwenyani. Ukusuka kwindlela amasuntswana asasazeka ngayo phezu kwento, ukubalwa kwesantya kunye nobunzima, imiqulu yamasuntswana okanye ukushiyeka kumakhulu amasuntswana ahlukaniswe kwinto ephambili njengekhephu.
Isifundo esihle kakhulu kunye nomsebenzi ofunyenweyo njengomlingiswa ohamba emhlabeni ozele likhephu okanye ungawusebenzisa njani umhlakulo ukucoca indlela yekhephu ukuze iziphumo zisondele kwinyani.
Ividiyo ebonisa indlela ukulungisa amaxabiso athile Ungafumana ikhephu elingamanzi ngakumbi okanye icompact ngakumbi. Ngale ndlela zinokusetyenziswa ngokweziphumo eziyimfuneko kuyo nayiphi na ifoto yaloo mboniso bhanyabhanya ubizwa ngokuba yiFrozen.
Oovimba abagqwesileyo kwabo bafunda i-3D okanye ungene kwihlabathi lomzekelo. Ukuba ujonga ngakumbi malunga nopopayi, ungaphoswa nguMiyakazi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » Ialgorithm yokugxeka ukumangalisa kwekhephu okubonwe kwiDisney's Frozen